Kenya oo ceyrisay qaar kamid ah qareenadii ku matalayay Kiiska Soomaaliya kala dhaxeeya – Bandhiga
Kenya oo ceyrisay qaar kamid ah qareenadii ku matalayay Kiiska Soomaaliya kala dhaxeeya
Sida ay qorayaan wargeysyada Kenya ka soo baxa xukuumadda Nairobi ayaa ku dhawaaqday in ay ceyrisay lix Qareen oo caalami ah kuwaas oo dowladda Kenya ku matalayay kiiska Badda ee ICJ ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Kenya Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha Kenya iyo Xeer Ilaaliyaha guud ee Kenya Kihara Kariuki, ayaa iksu afgartay in la ceyriyo lix qareen oo Caalami ah sidoo kalena waxaa ay Maxkamadda ICJ ka codsadeen in dhegeysiga kiiska dib loo dhigo.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Kihara Kariuki oo dhankiisa war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxaa uu ku sheegay in iyaga oo qaadanaya qareenno cusub oo Caalami ah ay doonayaan in dib loogu dhigo dhegeysiga kiiska oo billaabnaya 9ka Bishan September oo fuuda inagu soo heyso.
Dhamaan Qareennada ay Kenya iska ceyrisay ayaa ayaa kala ah Payam Akhavan oo u dhashay Mareykanka, Vaughan Lowe oo u dhashay UK, Alan Boyle oo u dhashay UK, Mathias Forteau oo u dhashay France, Mr Karim Khan UKand iyo Amy Sanders oo u dhashay UK.
Waxaa xusid mudan in Dowladda Soomaaliya ay iska diidday sheegashada Kenya ee Biyaha Soomaaliya waxaana ay dacweysay sanadkii 2014kii iyadoo lagu wado in bishan September la soo gabagabeeyo.